बच्चा जन्माउनै बिर्से कोरियनले, जन्मदर इतिहासकै सबैभन्दा कम, जन्मने भन्दा मर्नेहरु बढि – Eps Sathi
December 30, 2021 958
सउल, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियामा अक्टोबर महिनामा जन्मिने बच्चाहरुको संख्यामा कमि आएको छ। अक्टोबर महिनामा कोरियामा सन १९८१ पछिकै सबैभन्दा कम बच्चा जन्मिएका छन। बुधबार प्रकासित तथ्याङ्कअनुसार जन्मदरमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ जसका कारण देशको जनसंख्याको सन्तुलन नै बिग्रन डर बढ्दै गएको देखिएको छ।
कोरियाको तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको आँकडा अनुसार अक्टोबर महिनमा कोरियामा कुल २० हजार ७ सय ३६ बच्चाको जन्म भएको छ। यो संख्या गत बर्षको यसै महिनाको तुलनामा ५.२ प्रतिशतले कमि हो। अक्टोबर महिनामा जन्मिएका बच्चाहरुको संख्या अघिल्लो महिना अर्थात सेप्टेम्बर महिनाको भन्दा कम हो। सेप्टेम्बर महिनामा कोरियामा कुल २१ हजार ९ सय २० बच्चा जन्मिएका थिए।
दक्षिण कोरियामा सन २०२१ को पहिलो १० महिना अर्थात जनवरी देखि अक्टोबर महिनाभित्र कुल २ लाख २४ हजार २ सय १६ बच्चा जन्मिएका छन। यो संख्या अघिल्लो बर्ष अर्थात सन २०२० को पहिलो १० महिनाको तुलनमा ३.६ प्रतिशतले कम हो। दक्षिण कोरियामा लामो समयदेखिको आर्थिक मन्दि तथा घर तथा आवास र जग्गाको भाउमा अत्याधिक बृध्दि भएका कारण मानिसहरुले बच्चा जन्माउन हिच्किचाई रहेको अनुमान गरिएको छ। उच्च मूल्य बृध्दि तथा आर्थिक मन्दिका कारण धेरै जसो युवाहरु विवाह नै गर्न तयार छैनन भने विवाहितहरु पनि महङ्गीका कारण बच्चा जन्माउन डराइरहेका छन।
दक्षिण कोरियाको कुल प्रजननदर अर्थात एक महिलाले आफ्नो जीवनअवधिभर जन्माउने बच्चाको औषत संख्या अघिल्लो बर्ष ०.८४ मात्रै रहन गएको थियो। यो प्रजननदर विश्वका विभिन्न देशहरुको तुलनामा निकै कम हो। यसैपछि दक्षिण कोरियामा पछिल्लो ८ महिनामा कुल जन्मिनेहरुको संख्या भन्दा म’र्नेहरुको संख्या बढि भइरहेको छ। जसले प्राकृतिक रुपमै देशको जनसंख्या घटिरहेको छ।
कोरियामा सन २०२० मा पहिलो पटक प्राकृतिक रुपमा जनसंख्या घटेको पाइएको थियो। सन २०२० मा पहिलो पटक यहाँ कुल जन्मिने बच्चाहरुको संख्या भन्दा कुल म’र्नेहरुको संख्या बढि रहेको पाइएको थियो। त्यसैगरी अक्टोबर महिनामा कोरियामा कुल १५ हजार २ सय ३ जनाले विवाह गरेका छन। यो संख्या अघिल्लो बर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७.७ प्रतिशतले कमि हो। कोरियाको तथ्याङ्क विभागका अनुसार यसरी विवाहमा भारी गिरावट आउनुका कारण को’रोना रहेको छ। को’रोनाका कारण धेरै मानिसहरुले आफ्नो विवाहको कार्यक्रम स्थगित गरेको पाइएको छ।
Prevकन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालीकाले मौषमी कामदार कोरिया पठाउँदै? कस्तो भिजा हो यो? जानौं
Nextपहिलो भेटमै माया बस्यो र विवाह गरे, एक महिनापछि पो थाहा भयो श्रीमति पोर्नस्टार रहिछिन